Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2016
Be diplaoma lasa 4mi- ? Ohatra iray amin'ny Malagasy mpiasa!
2016-06-03 @ 21:33 in Ankapobeny
Tohina tanteraka ny tena nahita ity tsanganana iray tao amin'ny Facebook ity. Vehivavy iray efa zokiolona 79 taona, mpampianatra ny asany teo aloha fa tsy nanao Cnaps ny mpampiasa azy tamin'ny sekoly tsy miankina iray. Manana ny diplaoman'ny Bacc ary manana diplaoma oniversitera tamin'ny Lalàna sy ny teny frantsay, araka ny fitantarana, tsy manambady, tsy mananjanaka, tsy misy miahy, tsy misy miraharaha, tsy misakafo rehefa tsy misy vola, tahaka ny tranon'akoho ny tranony nefa ofaina 15.000 ariary. Efa notoriany ny mpampiasa azy fa tsy nahazo rariny izy. Eto Antananarivo renivohitr'i Madagasikara no misy izany toe-javatra izany.
Sao dia heverinao fa tranga maningana eto Madagasikara izany toe-javatra izany? Mahasahy miteny aho fa tsia dia tsia ny valiny. Vokatry ny fanoritana ny fampianarana eto Madagasikara hitodika amin'ny teny vahiny dia lasa tsy mahalala ny harenany voalohany ny Malagasy fa jamban'ny fitodihana any ivelany. Fa raha tafavoaka eto Madagasikara ianao toa "avotra" ihany, fa raha tsy tafavoaka eto kosa dia gejain'ny vahiny sy ny mpiara-misaosy aminy eto an-tanindrazana. Notezaina ho mpiasa isika Malagasy, niniana tsy hahay na hahasahy mihary izay nandalo fianarana, tsy mahagaga raha ireo "tsy tafita" tamin'ny fianarana indray no nahay nihary satria tsy tratran'ny fandemen-tsaina ireny olona ireny.
Eto Madagasikara ve? Efa misy avy hatrany ny sokajin'olona ry zareo ihany no toa mahazo alalana hanao fihariana goavangoavana, dia lovain-janaka aman-jafy ilay fihariana. Ry zareo irery no afa-mindram-bola any amin'ny Banky sy mahasahy manorina. Isika kosa eto ankilan'izany efa nopotehina ny fahasahiana sy ny finiavana ho mpitarika sy mpitari-dalana. Efa malaza ihany koa moa ny hoe isika Malagasy ihany no mifaninana manintona hidina izay mitady hisandratra. Efa ela aho no te-hitabataba hoe tsy rariny izao mahazo ny Malagasy mpiasa izao fa matahotra ny haninkeliny daholo... "mbola kely ny zaza sao tsy misy mpiahy!"... Noadinoina tanteraka ilay hoe izay mahasahy maty no mifono lambamena, fa heverina ho adala ianao raha manao izany fihetsika izany. Tena marina ve ilay hoe taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra irery vao mamaky takotra? Fa toa izaho irery no taitra fa ny hafa tsy mety taitra? Sa taitra tsy miteniteny?
Ry Malagasy ô! Raha tsy izao dia rahoviana? Amin'ny fotoana rehetra anie e: mila mijoro amin'izay ho'aho ianao, tohero ny tsy rariny atao aminao, tsy mbola mila herisetra izany fa mila herimpo, tsarovy fa raha itsahiny indray mandeha ianao no tsy miteny dia hohitsahiny hatrany amin'izay satria tsy manana ny lanjany intsony. Tsy misy lehibe tahaka ny vatolampy fa rehefa tsy miteny dia angeren'ny vorona. Aza gaga atsy ho atsy raha misy tantara renao atsy ho atsy.
Jentilisa, androany 3 jona amin'ny 23:30 ora Antananarivo